အာမေဍိတ် အဘိဓာန် - အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
အာမေဍိတ် အဘိဓာန် - အပိုင်း (၁)
Posted by Language Republic on February 3, 2016 at 12:01 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အောက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြောဆိုသူများသုံးလေ့ရှိသော အာမေဍိတ်စာရင်းတစ်ခုကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အာမေဍိတ်ဆိုတာကတော့ Aha နှင့် Wow ကဲ့သို့သော သဒ္ဒါအရ အဓိပ္ပါယ်မရှိသော်လည်း စိတ်ခံစားချက်များကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများဖြစ်ပါတယ်။
အာမေဋိတ်အများစုကို aaaaaah!!!!! သို့ awwwwwwww ကဲ့သို့ ၄င်း၏ အသံအတိုင်း ဆွဲဆန့်ပြီး ရှည်ရှည်ဆိုပါက ပို၍ အားကောင်းစေပါ တယ်။ ဤစာရင်း၌ အတိုဆုံးနှင့် အခြေခံအကျဆုံး အာမေဋိတ်စကားလုံးများကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ တချို့ကို မတူသောအဓိပ္ပါယ်များနှင့် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်ခန့် ဖော်ပြထားပြီး တခြားသော ရေးသွင်းချက်အောက်တွင် ကွဲပြားသော စာလုံးပေါင်းအနေနှင့် ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁။ aah! (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - aaah, aaaahh)
ကူပါ/ကယ်ပါ။ ကြောက်လန့်ခြင်း၊ ထိပ်လန့်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ "အား"လို့ပဲ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။
E.g. Aaaah! It's eating my leg! (Aaaah! ကျွန်တော့် ခြေထောက် ကို စားနေတယ်။)
၂။ aha (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - a-ha)
နားလည်ပြီ။ နားလည်ခြင်း၊ အောင်ပွဲခံခြင်းကို "ahh" ဟုသုံးနိုင်ပါတယ်။
E.g. Aha! So you took the money! (Aha! ဒါဆိုရင် ပိုက်ဆံတွေယူသွားတာ မင်းပေါ့။)
ကျေးဇူးပြု၍ နားဆင်ပါ။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ လည်ချောင်းရှင်းသံ။ တစ်စုံတစ်ယောက်၏အာရုံကို ရယူုရန် အသုံးပြုသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုသူက သင်ရှိနေတာကို မသိလျှင် (သို့) မေ့နေပုံပေါ်လျှင် ဖြစ်ပါတယ်။
E.g. Ahem! Swearing is against office policy. (Ahem! ဆဲဆိုခြင်းသည် ရုံးရဲ့ မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။)
၄။ Ahh (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - Ahhh)
ဟုတ်ပြီ၊ နားလည်ပြီ။ သဘောပေါက်ခြင်း၊ နားလည်ခြင်း။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ ၄င်းတို့အစား "aaah" (သို့) "eh" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
E.g. Ahh, yes, I understand now. (Ahh - ဟုတ်ပါပြီ။ အခုတော့ နားလည်သွားပါပြီ။)
၅။ Argh (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - Augh)
ဒုက္ခပဲ ။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းခြင်းကို "Argh" ဟုသုံးနိုင်ပါတယ်။
E.g. Argh, the car won't work! (Argh! ကားက မနိုးဘူး။)
၆။ Aww (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - aw, awww)
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ သံယောဇဉ်နှင့်ယှဉ်သော သဘောကျခြင်းကို "Aww" ဟုသုံးနိုင်ပါတယ်။
E.g. Aww, what an adorable puppy. (Aww, ချစ်စရာ ကောင်း လိုက်တဲ့ ပါပီလေး။)
၇။ Aww (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - aw, ohh, ahh)
ဆိုးလိုက်တာ။ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ် သနားခြင်း၊ ကရုဏာသက်ခြင်းကို "Aww" ဟုသုံးနိုင်ပါတယ်။
E.g. Aww, it hit him right in the nuts! (Aww အဲဒါ သူ့အရှိုက်ကို ထိုးမိသွားမှာပဲ။)
၈။ Aw (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - Oh)
လုပ်စမ်းပါကွာ။ အနည်းငယ်စိတ်ပျက်ခြင်း၊ (သို့) ကန့်ကွက်ခြင်းကို "Aw" ဟုသုံးနိုင်ပါတယ်။
E.g. Aw, don't be like that! (Aw အဲဒီလို မလုပ်ပါနဲ့။)
၉။ Bah (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - Whatever)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ အထင်အမြင်သေးခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်းကို "Bah" ဟုသုံးနိုင်ပါတယ်။
E.g. Bah, I never liked him anyways. (Bah ငါ ဘယ်တုန်းကမှ သူ့ကို မနှစ်သက်ခဲ့ဘူး။)
၁၀။ Boo (အခြား ဆင်တူစကားလုံး - Booh)
အဲဒါ ဆိုးလိုက်တာ။ သဘောမကျခြင်း၊ အထင်သေးခြင်းကို "Boo" ဟုသုံးနိုင်ပါတယ်။
E.g. Boo, get off the stage! (Boo, ဇာတ်စင်ပေါ်က ဆင်းပါဗျို့။)
Vidarholen.net မှ Dictionary of interjections ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းသင်ခန်းစာကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အာမေဍိတ် အဘိဓာန် - အပိုင်း (၂)
အာမေဍိတ် အဘိဓာန် - အပိုင်း (၃)
အာမေဍိတ် အဘိဓာန် - အပိုင်း (၄)
အာမေဍိတ် အဘိဓာန် - အပိုင်း (၅)
အာမေဍိတ် အဘိဓာန် - အပိုင်း (၆)
အာမေဍိတ် အဘိဓာန် - အပိုင်း (၇)
Permalink Reply by Aung Aung Myint Oo on February 3, 2016 at 14:28
Permalink Reply by htaylim on February 11, 2016 at 17:25